Vanyori vashanu vakaita nhoroondo | Zvazvino Zvinyorwa
5 vanyori vakaita nhoroondo
Carmen Guillen | | Vanyori, Literature
Munyika yezvinyorwa, senge mune chero ipi zvayo, pakave nemazita makuru evakadzi vakambonyaradzwa, vakavanzwa uye vakatopimwa. Vamwe, nerombo rakanaka, vakazvarwa munguva yepanguva ino uye vakakwanisa kuzviratidza sezvavaida nekunyora mabasa makuru ane mazita ekutanga uye ekupedzisira.
Muchikamu chino, tiri kuenda kuzokuudza nezve vazhinji vavo, vese avo vaifanira kuhwanda pasi pezita rechirume uye nevaya vakaita saizvozvo nemazita avo chaiwo. Vese vamwe nevamwe vanga vari uye vari vanyori vakuru vakaita nhoroondo. Kana iwe uchida kuziva kuti ndeapi akasarudzwa uye kuziva zvishoma nezveumwe neumwe wavo, heano mamwe akakodzera data.
1 Gloria Fuertes (1917-1998)
3 Rosalía de Castro (1837-1885)
Mudetembi wechiSpanish wechizvarwa chekutanga chehondo.
Ndezvizvarwa zve50 uye "Postismo" (nhetembo kufamba).
Akashanda pamwe muzvirongwa zvisingaverengeke zvevana nevechidiki paTVE.
Chechikadzi, aigara achidzivirira muzvinyorwa zvake, kuenzana pakati pevarume nevakadzi.
Pacifist uye murwi wezvakatipoteredza.
Mufananidzo wakakosha wenhetembo dzeSpanish dzezana ramakumi maviri.
Akaita zvinyorwa zvevakuru, nhetembo, nyaya dzevana, theatre, nezvimwe.
Akafa nekenza yemapapu.
Akakosha chimiro cheChirungu chinyorwa chinyorwa.
Mukadzi uye munyori anokosha Anglo-Saxon Yemazuva ano yezana ramakore rechiXNUMX.
Akataura muzvinyorwa zvisingaverengeke zvematambudziko aive nevanhukadzi panguva iyoyo yekuzvipira hupenyu hwavo kunyora.
Akanyora zvinyorwa, zvinyorwa, nyaya pfupi, tsamba, nezvimwe.
Akaroora munyori aine makore makumi matatu Leonard Woolf.
Akanga ari mudiwa wemunyori Vita Sackville-West, uyo aive akaroora naHarold Nicolson. Kudanana kwavo kwakatora makore angangoita gumi asi mushure mazvo, vakaramba vari shamwari.
Akanga ane bipolar disorder. Izvi, pamwe nekushushikana kwake, zvakaita kuti azviuraye musi waKurume 28, 1941. Akasvetukira muRwizi Ouse nejasi rake rizere nematombo muhomwe dzake.
Zvina zvake mamwe maitiro anoshanda Ndizvo: "Mai Dalloway", «Kuimba yemwenje», "Orlando" y "Waves".
Akazvarwa muna 1837.
Spanish mudetembi uye munyori wenhau, iyo yaakanyora muchiSpanish nechiGalician, aine chinangwa chekuti mutauro wake wekuzvarwa waisazofa.
Pamwe chete na Gustavo Adolfo Becquer, akanga ari mutangiri wenhetembo dzazvino uno dzeSpain.
Kunyangwe mhando yaakarima zvakanyanya yaive prose, Rosalía aizivikanwa pamusoro pezvose nhetembo yake, kunyanya basa rake. «Galician Songs».
Aive iye munyori akapa zvakanyanya kuimba yeGalician-Portuguese, achipa chokwadi mukurumbira kumutauro weGalician.
Akafa nekenza yechibereko muna Chikunguru 15, 1885.
Wekare munyori we Chirungu zvinyorwa, anozivikanwa pamusoro pese nezvebasa rake "Kudada uye Kusarura".
Yakave yakanyorwa uye yakarongedzwa nenzira dzakasiyana, sekureva kwevatsoropodzi vakasiyana-siyana. Nepo mumwe achimuona semunyori anochengetedza, vatsoropodzi vechikadzi uye vatsoropodzi vanotsigira kuti zvinyorwa zvake zvinogona kuonekwa sekufungidzira kwepfungwa pane dzidzo yevakadzi kubva kune mumwe munyori mukuru: Mary Wollstonecraft.
Mabasa ake akaunzwa kuna elokuva kakawanda.
Mazhinji emabasa ake akanyorwa pasi pezita rekunyepedzera uye haana kunzi munyori mukuru kusvika muzana ramakore rechiXNUMX.
Yakanga iri mukati Charlotte bronte, mumwe munyori mukuru, kune kumwe kwekushoropodza kunotyisa kwemabhuku ake.
Akafa nechirwere chetachiona musi waJuly 18, 1817 aine makore makumi mana nerimwe.
Spanish munyori we Zera regoridhe.
Munyori we mapfupi enganonyorwa ayo akaongororwa uye akarambidzwa neKubvunzurudza muzana ramakore rechiXNUMX, kunyangwe vasati vawana budiriro huru uye vakaburitswazve.
Mabasa ake ane kuverenga kwakakurumbira kwevakadzi.
Munguva yemakore makumi masere, Televisión Española, akaburitsa nhevedzano inozivikanwa se "Bindu reVenus", yakafuridzirwa nenyaya dzesviro nemunyori.
Zvake anonyanya kucherechedzwa mabasa ivo vaiva "Rudo uye enganonyorwa dzemuenzaniso", "Zvinoodza moyo" y "Kutengesa muushamwari".
Zvinotendwa kuti akashaya mugore ra1661, asi hazvina chokwadi.
Izvo zvakakodzerawo kutaura vamwe vanyori senge Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet, Ana María Matute, Simone de Beauvoir uye yakareba etcetera ine mabasa nehupenyu zvinoshamisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » 5 vanyori vakaita nhoroondo
Iwe unoziva iyo Bookchoice application?
Makore makumi manomwe nemashanu mushure meHondo yeStalingrad. Mamwe mabhuku nezvake